SHEEKOOYIN Archives - Ceelhuur Online
Home > Archive by Category SHEEKOOYIN
September 17, 2018 admin1621
Yuusuf dareen xoogan baa hareeyay. Naxdin laguma sheegi karo, cabsi uma eka, xanaaqna raad kuma leh. Qolkii buu albaabkii usoo xiray. Misana sidii in uu caruur yar ciyaarsiinayo dhaqso u furay. Weli waa fadhisaa. Waa Muno oonan biyo is marin. Si uu yeelo buu garan waayay. Muno, iyadu Yuusuf markii labaad uu albaabka furay bay […]
September 7, 2018 admin1391
Yuusuf iyo Adeer Cali inkastoo ay xilli hore Malaysiya yimaadeen, hadana guryihii ardayda loogu talo galay waa ka buuxsameen. Maadaama lacagtii jaamacadda ay dhiibeen, guri sadex qol iyo fadhi ah oonan ka mid ahayn guryaha ardayda loogu talo galay baa isla qiimaha ardada kale laga qaaday lagu siiyay. Labadooda midba qol buu camirtay. Sariiraha, katabaanada, […]
August 30, 2018 August 30, 2018 admin1444
Cutubka 24aad Guriga Ree Jaamac Sandhool maba moodid gurigii maalin ka hor sidii in ay tacsiyi taallo u aamusnaa. Farxaddii iyo ranrayntii lagu yaqiinay baa soo laabatay. Markii ugu horaysay mudo dhowr bilood ah buu raadiye hees macaani ka daarantahay miis barandada yaalla ka dul balwanayaa. Guurka Muno wuxuu ku xiranyahay Mukhtaar oo Xamar yimaada […]
August 24, 2018 admin1438
Muno iyada wiilka la siinayo lagalama hadlayo oo aabeheed isagaa taladeeda la wareegay. Inkastoo Jaamac Sandhool gabar la soo doonto oo la bixiyo uu waligiis doorbidi jiray, hadana xiligii uu Muqdisho iskuulka sare ka galay buu qaatay fikir cusub oo ah in gabadhii si edeb leh wiil ay rabto u keensato, la siiyo. Inkastuu caruurtiisa […]
August 17, 2018 admin1322
Hooyo Cibaado iyo aabe Jaamac hal mar bay gaarigii kasoo wada dageen oo cagaha dhulka wada dhigeen. Hooyo Cibaado albaabkii gaariga markiiba waa xirtay halka aabe Jaamac uu albaabkii oo furan Muno dhankeedii soo aaday. Muno inta soo haaday oo dhowrkii mitir ee gaariga iyo halka ay taagantahay u dhaxeeyay laba tilaabo ka dhigtay hooyadeed […]
U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 27aad
August 10, 2018 admin1442
Ma qabataa mise waad iska daysaa? buu ku laba labaynayaa. Wax yar markuu agtaagnaa taleefankii oo dhacaya, aabe Warfaana uu is leeyahay waa soo dhawyahay, oo taleefankoo dhacaya hadduu yimaado wuu qaban doonaa, buu inta guriga gadaal u galay taleefankii meesha fiiladiisu kasoo bilaabanto kasoo kala siibay. “Mar uun iga aamus, buuqaagaanba na cacaye!” buu […]
August 5, 2018 Cali Yare1133
Qormadaan waxaa igu kaliftay markaan la kulmay Gabar la dafirayo, waxaan aadnay Xaflad Muhiim ah oo Soomaali ka dhaxaysay rag iyo Dumar, waxaan goobta gaaray Munaasabadda oo meel dhexe maraysa oo dhowr qof ay hortay hadleen, mar aan dhagaystay Dhowr wiil oo goobta ka hadlay ayaa loo yeeray Gabar ku hadlaysay Magaca Haweenka. Sida aan […]
August 3, 2018 admin1495
Cutubka 22aad Muno, dhowr bilood bay reerkoodii kasii maqantahay. Si kasta ooy guriga Fatxi ugu qanacsantahay, Yuusuf wehelkiisana ay u haysato, hadana reerkooda ka maqnaanshahooda iyo waalidkeed ka war la’aan toodu waxay ku tahay nabar markii ay xasuusataba damqa. Dadaalkii iyo silicii ay soo martay ma doonayso in ay noqdaan hal bacaad lagu lisay, sidaas […]
U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 25aad
July 28, 2018 admin1729
Wareer cawo waa loo waabariistay. Ree Xiiranana dhamaantood, marka laga reebo Ciise iyo aabihiis, waa kasoo jeesteen Muno. Arinta Muno oo Ree Xiirane dad jirri ah u ekeysay, bay rabi lahaayeen in ay soo afjaranto. Dadka Xaafadooda ooy sharaf iyo magac ku dhex lahaayeen, wax haruufaya iyo wax xamanaya bay u kala baxeen. Ciise wuxuu […]
Sheeko Jaceyl oo Xiiso Leh: U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 24aad
July 20, 2018 admin2775
Inta ay gaariga sii daba socdaan, Cabdi Xiirane iyo wiilkiisa Ciise kalsoonida ay qabaan, waxay bilaabeen in ay ka sheekeystaan markii ay Muno soo helaan halkii ay dejin lahaayeen. Cabdi Xiirane wuxuu rabaa isla beriba in uu odayaasha beesha isugu yeero si uu gabadha u mehriyo. Wuxuu dhibsanayaa in gabar aanan la qabin ay guriga […]